१०६ वर्षे उमेरमा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया, आँखा खुलेपछि खुशी
भरतपुर आँखा अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा मंगलवार बिहान भेटिएका एक वृद्ध निकै खुशी देखिन्थे । १०६ वर्षको उमेरमा १ साताअघि आफ्नो देब्रे आँखाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रियापछि आँखा देखेसँगै उनमा खुशी थपिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुर निवासी पुननारायण श्रेष्ठको यो उमेरमा सफल शल्यक्रिया भएपछि उनी निकै खुशी भएका छन् । रासस प्रतिनिधिले मान्छे चिन्नुहुन्छ भन्न नपाउँदै उनले भने, ‘तपाईंले लगाएको जकेट कालो रहेछ, पर बसेकाहरूलाई पनि देखेको छु ।’ १ वर्षअघिदेखि धमिलो हुँदै गएको आँखाले पछिल्लो समय देख्न छाडेपछि उनी चिन्तित थिए ।
उनलाई आँखाको शल्यक्रिया गर्न नजिकै घर भएकी भरतपुर आँखा अस्पतालमा कार्यरत छायाँ श्रेष्ठले सुझाव दिइन् । त्यति मात्रै होइन, छायाँले अस्पतालका डा. मारिया गौतमसँग परामर्श गरेर शल्यक्रियाको प्रबन्ध पनि मिलाइदिइन् ।
सफल शल्यक्रियापछि निकै उत्साहित हुँदै वृद्ध श्रेष्ठले आफूले जीवनमा पुनः आँखा देख्ने अवसर पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
‘उपचार गरे हुँदोरहेछ,’ उनले भने । उनीसँगै रहेका जेठा छोरा नारद श्रेष्ठले डोराएर हिँड्नुपर्ने बुबा आफैं हिँड्न थालेपछि निकै खुशी भएको बताए । अस्पतालका चिकित्सक डा. गौतमले वृद्धहरूको शल्यक्रिया कठिन हुने भएपनि बिरामीले चाहेमा सफल शल्यक्रिया गर्न सकिने बताए । आफ्नो जीवनमा यति धेरै उमेरका व्यक्तिको शल्यक्रिया गरेको भने पहिलो भएको उनले बताए ।
उपचारमा उमेरले नछेक्ने भएकाले आत्मबल उच्च गरेर उपचार गर्न आउन गौतमले आग्रह गरे । भरतपुर आँखा अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा ८ जिल्लाका १ लाख ७१ हजार ४०० जनाको आँखाको उपचार गरेको थियो ।
अस्पतालले विभिन्न जिल्लामा शिविर सञ्चालन र अस्पताल एवं आँखा उपचार केन्द्रमार्फत बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेका अनुसार भरतपुरमा रहेको मुख्य अस्पताल र भरतपुर हाइटमा रहेको बहिरङ्ग विभागमार्फत १ लाख १८ हजार ४५५ बिरामीको आँखाको उपचार गरिएको हो । ९ आँखा उपचार केन्द्रमार्फत पनि अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा गरिएका शिविरमार्फत २२ हजार ९८५ को आँखाको उपचार गरिएको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित सो अस्पतालले गत आवमा ५ हजार ६९६ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको थियो । अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णराज धरेलका अनुसार हरेक वर्ष बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
वृद्धहरूको पनि सफल शल्यक्रिया हुने भएकाले अन्धकारमा जीवन नबिताउन सबैमा आह्वान गरिएको बताउँदै उनले त्यस्ता व्यक्तिको उपचारमा अस्पतालले प्राथमिकता दिएको बताए ।